ဦးတင်မောင်သန်း “မုန်းတီးရေးသွေးထိုးလှုံ့ဆော်ပြဿနာ ရှာသူတွေအလိုကျ ဖြေရှင်းတာကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်မယ်။အရေးယူဖို့လည်းပြတ်ပြတ်သားသားတောင်းဆုိုမယ်” | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
Homeဦးတင်မောင်သန်း “မုန်းတီးရေးသွေးထိုးလှုံ့ဆော်ပြဿနာ ရှာသူတွေအလိုကျ ဖြေရှင်းတာကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်မယ်။အရေးယူဖို့လည်းပြတ်ပြတ်သားသားတောင်းဆုိုမယ်”
ဦးတင်မောင်သန်း “မုန်းတီးရေးသွေးထိုးလှုံ့ဆော်ပြဿနာ ရှာသူတွေအလိုကျ ဖြေရှင်းတာကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်မယ်။အရေးယူဖို့လည်းပြတ်ပြတ်သားသားတောင်းဆုိုမယ်”
May 3, 2017 drkokogyi
ရှာသူတွေအလိုကျ ဖြေရှင်းတာကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်မယ်။အရေးယူဖို့လည်းပြတ်ပြတ်သားသားတောင်းဆုိုမယ်(ဦးတင်မောင်သန်း၊ အစ္စလာမ်သာသနာရေးရာကောင်စီ၊အတွင်းရေးမှူးချုပ်)
ဟိန်းအောင် ဧပြီ ၂၈၊ ၂၀၁၇
သာကေတမြို့နယ်ရှိ အစ္စလာမ့်ဘာသာရေး အဆောက်အအုံ ၂ခုကိုတရားရုံးဆုံးဖြတ်ချက်မပါဘဲ အသုံးပြုခွင့်ဟန့်တားခံရမှုအတွက် အစိုးရကို ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက် သွာမည်ဖြစ်ကြောင်း အစ္စလာမ်သာသနာရေးရာကောင်စီမှတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကပြောကြားလိုက်သည်။
“ ဒီကိစ္စဟာအာဏာပိုင် အဆင့်ဆင့်မှာတာဝန်ရှိတယ် ၊ဒီကိစ္စကို မုန်းတီးရေးသွေးထိုးလှုံ့ဆော်ပြဿနာရှာသူတွေအလိုကျ ဖြေရှင်းတာကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်မယ်။
အရေးယူဖို့လည်းပြတ်ပြတ်သားသားတောင်းဆုိုမယ်”ဟု အစ္စလာမ်သာသနာရေးရာကောင်စီဌာနချုပ် အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဦးတင်မောင်သန်း က Myanmar Muslim Media သို့ပြောသည်။
အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များအား ရည်ညွန်းကာ“ကုလားလည်ချောင်းသွေးဖြင့်ချေဆေးမည်”ဟူသော လှုံ့ဆော်မှုများကို လူမှုကွန်ရက်တွင်ဖြန့်ဝေသူများပါဝင်သည့် အင်အား တစ်ရာဝန်းကျင်က သာကေတမြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတွင် အစ္စလာမ့်ဘာသာရေးစာသင်ကျောင်းများကိုပိတ်သိမ်းပေးရန် ယနေ့နေ့လည်ပိုင်းတွင် ဖိအားပေးတောင်းဆိုခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။
“မွတ်စလင်မ်တွေလုပ်တာကိုင်တာ ဥပဒေနဲ့မညီဘူးလို့ထင်ရင် သူတို့က အာဏာပိုင်ကိုတုိုင်လို့ပဲရမှာ သူတုို့ကိုယ်တုိုင်ပဲ ပိတ်မလုိုလုို ဖျက်မလိုလုို အဲသလိုဥပဒေမဲ့အင်အားပြခြိမ်းခြောက်နေတာတွေကို အာဏာပိုင်က အရေးယူကိုယူရမှာ ၊ အရေးမယူတာကိုက မျှတမှုမရှိတာဘဲ
လူနည်းစု အခွင့်အရေးကို လေးစားကာကွယ်မှုမရှိဘူး။တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိဘူး။ဆိုဒါကို ပြနေတာဘဲ” ဟုလည်း ဦးတင်မောင်သန်းက ဝေဖန်သည်။
သာကေတမြို့နယ်အတွင်းရှိအစ္စလာမ့်ဘာသာရေးအဆောက်အအုံများတွင် ၀တ်ပြုခွင့်မပေးရန် မဘသ သြ၀ါဒခံ မျိုးချစ်ရဟန်းတော်များသမဂ္ဂနှင့် သာကေတမြို့နယ်အခြေစုိုက် မျိုးချစ်သွေးဓမ္မကွန်ရက်ဝင်များက ဦးဆောင်ကာ အာဏာပိုင်အဆင့်ဆင့်ကို ဖိအားပေးတောင်းဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“ဘာသာရေးစာသင်ကျောင်းတွေ ဝတ်ပြုရှိခိုးတာမလုပ်ရဘူးဆိုတာ တဖက်သက်အနိုင်ကျင့်မတရားလုပ်တာဘဲ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ စာဘဲသင်ပြီး ဘုရားမရှိခိုးကြဘူလား ဘုရားစင်မရှိဘူးလား၊ရုပ်တုတွေ စေတီတွေမတည်ထားဘူးလား၊ဘုန်းကြီးကျောင်းမပြောပါနဲ့ လူမျိုးဘာသာစုံတက်တဲ့ လောကီကျောင်း မူလတန်းကျောင်းကနေတက္ကသိုလ်များအထိ ဘုရားရှိခိုးတယ် ဘုရားစင်ရှိတယ်”ဟု ဘာသာတရားများတွင်ဘာသာရေးအဆောက်အအုံများကိုအသုံးပြုပုံများကိုနှိုင်းယှဉ်ကာ ဦးတင်မောင်သန်းက သူ၏ အမြင်ကိုပြောသည်။
အမျိုးဘာသာသာသနာစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့၏ သြ၀ါဒခံအမျိုးသားရေးအစွန်းရောက်များဖိအားပေးတောင်းဆုိုမှုကြောင့် သာကေတမြို့နယ် အနော်မာ ၁၁ လမ်းနှင့်အနော်မာ ၁၂ လမ်း ရှိအစ္စလာမ့်ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ ၂ ခုကိုဆက်လက်အသုံးပြုခွင့်ဟန့်တားခံခဲ့ရသည်။
ထို့အပြင် ရမည်းသင်းရှိအစ္စလာမ့်ဝတ်ကျောင်းတော်များတွင် အာဇာန်(၀တ်ပြုရန်ဖိတ်ခေါ်သံ) ဆိုခွင့်ပိတ်ပင်ခံထားရခြင်းနှင့် ယခုလအတွင်း မြောင်းမြမြို့ ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်အချို့ ပြင်ဆင်ခွင့် ပြန်လည်ရပ်နားခံထားရခြင်းများ လည်းကြုံတွေ့နေရသည်။
← တရားမဝင်အဖွဲ့အစည်း လူရမ်းကား မျိုးညစ်တွေက သူတထူးရဲ့ဘာသာရေးဝတ်ပြု ကိုးကွယ်တာကို မင်းမဲ့စရိုက် ပုံစံနဲ့ ပြသနာရှာလာတယ် – အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်း (ထွေ/အုပ် နဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့က) ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူးလား ? လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေ မရှိဘူးလား ? ဥပဒေနဲ့အညီ အရေးယူ နှိမ်နင်းရမှာ မဟုတ်ဘူးလား ? ရမ်းကားသူတွေကိုဟန့်တားရမှာ မဟုတ်ဘူးလား? အေးချမ်းစွာနေတဲ့ ပြည်သူကို ကာကွယ်ရမှာ မဟုတ်ဘူးလား?
ဘာသာရေးလူမျိုးရေးအမုန်းတရားတွေပြန့်ပွားစေသူတွေကို အရေးယူသင့် →